Otu esi agbanwe IP na ama Android | Androidsis
Otu esi agbanwe IP na ekwentị gam akporo
Ignacio Sala | 18/11/2021 12:00 | Ngwa gam akporo, Nkuzi
Gbanwee IP on a smartphone ma ọ bụ kọmputa bụ a usoro na anyị nwere ike ime na ikwu mfe. Site na smartphone, ọ bụ usoro dị mfe dị ka ịgbanwee n'etiti njikọ data mkpanaka na netwọk Wi-Fi. Otú ọ dị, ọ bụrụ na anyị chọrọ iji IP ọzọ, ihe nwere ike inwe ntakịrị mgbagwoju anya, ebe ọ na-achọ ka anyị jiri ngwa ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ihe kpatara ịgbanwe IP metụtara nweta ọdịnaya geo-egbochiriIhe kachasị mfe bụ iji VPN, mana ọ naghị arụ ọrụ mgbe niile, ebe ọ bụ na ọ bụghị ihe niile bụ otu ma ọ bụ na-enye anyị otu ọrụ. Ọzọkwa, iji VPN abụghị naanị nhọrọ anyị nwere n'aka anyị.
1 Gịnị bụ IP
2 Otu esi agbanwe IP
2.1 Jiri VPN
2.2 Jiri netwọk Orbot Proxy jiri Tor
2.3 Malitegharịa ekwentị ahụ
3 Gbanwee IP na netwọk dị na mpaghara
4 Gịnị bụ ip m
Gịnị bụ IP
Tupu ịchọọ ngwa ma ọ bụ ọrụ ndị na-enye anyị ohere ịgbanwe IP anyị, anyị ga-edo anya maka ihe IP bụ na ihe ọ bụ maka ya. IP bụ, iji kọwaa ha n'ụzọ dị mfe, akara ikike nke mba ụwa nke anyị na-eji na-achọgharị ịntanetị. Mpempe akwụkwọ ikike a na-enye anyị ohere ịchọta ISP na mpaghara ala (onye na-ahụ maka ịntanetị) yana onye ọrụ na-eji ya.
Site na IP, ndị na-eweta ịntanetị mee ndekọ nke ibe weebụ na ọrụ niile nke ịntanetị anyị jiworo mee ihe, ndekọ nke enwere ike ịnweta naanị site n'aka ụlọ ikpe. Mana ọ dị, na ndị ISP nwere ike iji ya mepụta mgbasa ozi mgbasa ozi ma ọ bụ jiri data ahụ zụọ ahịa ozugbo.
Otu esi agbanwe IP
Ụzọ kachasị ọsọ na mfe iji gbanwee IP nke kọmputa, smartphone ma ọ bụ mbadamba bụ iji VPN. Netwọk nkeonwe nkeonwe na-enye anyị ohere iji IP nke obodo anyị chọrọ, nke mere na, mgbe ị na-eme nchọgharị, naanị akara anyị ga-eme. ezumike ga-abụ IP nke ikpo okwu VPN kenyere gịnị ka anyị ji.
Ma mgbe m na-ekwu na ọ bụ naanị akara anyị na-ahapụ na ịntanetị, m na-ekwu na ọ bụ naanị ya. Njikọ VPN zoo ọdịnaya niile anyị na-eziga na ịnata site na ịntanetị site na ihe nkesa nke anyị jikọọ na ya, ya mere onye na-ahụ maka ịntanetị anyị agaghị enwe ike ịmepụta ndekọ na ihe nchọgharị anyị.
Ọzọkwa, nyiwe VPN akwụ ụgwọ, iji RAM draịva siri ike, yabụ ozugbo ịmalitegharịrị ha, ha na-ehichapụ ọdịnaya niile na-akpaghị aka, ihichapụ nke a na-eme ozugbo anyị kwụsịrị iji ọrụ ha.
VPN ndị a ha anaghị echekwa ndekọ nke ihe nchọgharị anyị n'elu ịntanetị nke ị ga-eji zụọ ahịa ma emesịa, ihe, ọ bụrụ na VPN efu na-eme, nyiwe ndị na-adịghị eji RAM diski ihichapụ ọdịnaya, ma chekwaa ya ma jikọta ya na ezigbo IP anyị.
Iji jikọọ site na VPN, anyị ga-etinyerịrị ngwa VPN kwekọrọ wee họrọ obodo anyị chọrọ isi n'ime nhọrọ niile ọ na-enye anyị. Buru n'uche na, ọsọ njikọ Ọ nwere ike ọ dị obere karịa ọsọ gị na onye ọrụ gị na-arụkọ ọrụ.
Jiri netwọk Orbot Proxy jiri Tor
Tor bụ ihe nchọgharị na-enye anyị ohere ịbanye na webụ gbara ọchịchịrị, ọdịnaya enwere ike ịnweta naanị site na ngwa a yana nke ahụ Edepụtaghị ya n'igwe nchọta ọ bụla.
Iji banye na webụ gbara ọchịchịrị anyị ga-eji IP dị iche na nke anyị, IP nke ihe nchọgharị ahụ ga-enye anyị mgbe anyị na-eji ya, n'ihi ya, anyị enweghị ike ịhọrọ obodo ebe anyị chọrọ ijikọ ya.
Ọ bụ n'efu kpamkpam, yabụ na ọ bụ ezigbo nhọrọ maka VPNs, yana ọdịiche nke Enweghị ike ịhọrọ obodo site na ebe anyị chọrọ ijikọ na na ọ dị nwayọ karịa VPN, jiri nwayọ nwayọ.
Tor bụ ezigbo ikpo okwu maka jikọọ nwa oge na IP ọzọ, ebe ọ bụ na iji ya eme ihe mgbe nile bụ nnukwu isi ọwụwa n'ihi ịdị nwayọọ ya.
Site na Tor, anyị nwere ike ọ bụghị naanị ịnweta webụ gbara ọchịchịrị, mana anyị nwekwara ike nweta ibe ịntanetị ọ bụla ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-eche, iji nweta ibe ndị dị na Weebụ Ọchịchịrị, ọ dịghị search engine, mana ị ga-amarịrị webụ, weebụ nke na-eji ngalaba .onion.
Na ịntanetị ị nwere ike ịhụ ibe weebụ dị iche iche na ndepụta weebụsaịtị dị na webụsaịtị gbara ọchịchịrịNsogbu bụ na ọtụtụ n'ime ha na-akwụsị ịrụ ọrụ ngwa ngwa, ya mere ọ gwụla ma ị na-eji ụfọdụ ntanetị weebụ, yabasị, ọ dịghị mfe ịchọta ọdịnaya ma ọ bụ ibe weebụ iji jikọọ.
Orbot Proxy na Tor
Developer: Nrụpụta Tor
Malitegharịa ekwentị ahụ
Ikekwe ụzọ kachasị mfe iji gbanwee IP nke njikọ Wi-Fi anyị bụ reboot rawụta, ọ bụrụhaala na onye na-ahụ maka ịntanetị anyị anaghị enye anyị adreesị IP. Ọ bụrụ na ihe niile ịchọrọ bụ ka ị nwee ike ịbanye n'elu ikpo okwu na-ejedebe ọnụ ọgụgụ njikọ site na IP gị, nhọrọ a na-arụ ọrụ nke ọma na-enweghị iji otu euro ma ọ bụ hụ ka ọ na-ebelata ọsọ njikọ gị.
Gbanwee IP na netwọk dị na mpaghara
Ọ bụrụ na ihe ị chọrọ bụ gbanwee IP nke ngwaọrụ na netwọk mpaghara gị, naanị ihe ziri ezi ime bụ n'ihi na ọ na-emegide ngwaọrụ ọzọ nwere otu IP, ma ọ bụ n'ihi na anyị chọrọ iji IP ahụ na otu ngwaọrụ iji rụọ otu ọrụ.
IP na netwọk mpaghara na-amalite na 192.168.xx.xx. Ngwaọrụ ọ bụla nwere IP pụrụ iche, IP na enwere ike ịtọ ya na-akpaghị aka ma ọ bụ aka. Ngwa niile na-enweta IP nke netwọkụ mpaghara na-akpaghị aka, yabụ na mbụ anyị agaghị eme ihe ọ bụla iji hazie ya.
Gịnị bụ ip m
Na ịntanetị anyị nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke nhọrọ iji chọpụta ihe IP anyị bụ site na ibe ndị na-agụnye ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke mgbasa ozi na na, na mgbakwunye, Ha gụnyere usoro trackers na kuki iji nyochaa anyị.
Otu n'ime ibe kacha mma ịmara IP anyị na nke ahụ anaghị agụnye ụdị ọ bụla nke fast.com tracker, weebụsaịtị Netflix na-enye anyị ohere ịlele ọsọ njikọ ịntanetị anyị.
Ọbụlagodi na ọ si na Netflix, anyị nwere ike jiri ya na-enweghị anyị ga-abụ ndị debanyere aha nke ya gụgharia video ikpo okwu.
Ozugbo ị nyochachara ọsọ nke njikọ ịntanetị anyị, pịa Gosi ihe omuma ndi ozo iji nweta IP anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Otu esi agbanwe IP na ekwentị gam akporo
Ngwa bara uru kacha mma maka gam akporo